कोरोना फैलिरहदा पो र्न फिल्म (अ श्लि ल भिडियो) को व्यापार | NewsSudur
एक अस्पतालमा शास फेर्न अ फ्ठ्या रो भएर बेडमा महिला सुतिरहेकि हुन्छिन् । त्यतिकैमा मास्क (मुखावरण) लगाएर एक पुरुष डाक्टर कोठामा छिर्छन् । महिला बेडमा शास फेर्न न सकेर त ड्पि रहेकि हुन्छिन् । डाक्टरले उपचार गरे जस्तो गरि महिलालाई मास्क, गाउन लगाएर कोरोनाको जोखिमबाट सुरक्षित बनाउँछन् । अनि शुरु हुन्छ अ श्लि ल भिडियो । जहाँ युवायुवति न ग्न हुदैँ एकआपसमा लि प्त भएको भिडियो शुरु हुन्छ । वास्तवमा अहिले विश्वमै कोरोना भाइरसले आ तंक म च्चा इरहेको बेला पोर्न इन्डष्ट्रि भने फस्टाइरहेको छ । कोरोनाबाट सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएर अ श् िलल भिडियो बनाएका पोर्न निर्देशकहरुले राम्रै कमाई गरिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र नै धरा शायी बनिरहेको बेला ‘पो र्न साइट’हरुले भने कमाउने ध न्धा बनाएका छन् ।
पछिल्लो समय थुप्रै पोर्न साइटहरुले ‘मास्क’ र भाइरलबाट जोगिने गाउन, अर्थात् ‘सूट’ पहिरिएर यौ न सम्पर्क गरिराखेका भिडिओ पोस्ट गरेका छन् । ‘डि सर्टेड वुहान’, ‘टी एसए एजेन्ट डि टेन्स वुमन स स्पेक्टेड अ फ को रो ना भा इरस’ जस्ता टाइटलका भिडिओ पो र्न साइटहरुले पोस्ट गरेको डेलीमेलले जनाएको छ ।
साथै पिपीइ अर्थात् विशेष खालको सूट, फेस मास्क तथा हस्पिटल गाउन जस्ता पहिरनमा यौ न सम्पर्क गरिराखेका भिडिओ ती साइटले उत्पादन गरेका हुन् । चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसबाट ९५ हजार मानिस संक्र मित भइसकेका छन् ।
८० भन्दा धेरै देशमा फैलिएको यो भाइरलका कारण ३ हजार २ सयजनाको मृ त्यु भइसकेको छ । आम मानिसहरु जसरी ‘ह र र मुभी’सँग नजिकिन्छन् त्यसै गरी कोरोना भाइरसको विषयसँग आकर्षित भएको पो र्न मुभी निर्मार्ताहरुको तर्क छ । साथै कोभिड–१९ ले विश्वभर त्राससँगै रहस्य पनि निम्त्याउने उनीहरुको भनाइ छ । इटलीमा कि स र ह ग गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि यस्ता भिडिओ निर्माण गर्न थालेको बताइन्छ ।
डराउनुपर्दैन कोरोनाबाट यति ७ कुरा जाने पुग्छः
विश्वव्यापी रुपमा फैलँदै गएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बारे धेरै मानिसमा भ्रम छ । यसको संक्रमण हुने बित्तिकै मृत्यु हुन्छ डर एकातिर छ भने अर्कातर्फ यो कसरी एक मानिसबाट अर्कोमा सर्छ भन्ने बारे पनि धेरैलाई जानकारी छैन ।
यसको संक्रमणबाट कसरी बच्ने भन्ने बारे विश्व स्वास्थ्य संगठनले केही उपयोगी सुझवहरु दिएको छ ।
हातले आँखा, नाक र मुखमा छुने नगर्नुहोस् ।
किन ? हातले जताततै छुइने हुनाले त्यसमा भाइरस टाँसिन सक्छन् । यदि हातमा भाइरस टाँसिन पुग्यो भने त्यसबाट शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छ र तपाईं विरामी पर्न सक्नु हुन्छ ।
छ। किन ? खोख्दा वा हाछिउँगर्दा बाहिर आउने तरल कणले भाइरस फैल्याउन सक्छन् । यस किसिमको सही स्वासप्रस्वास सफाइमा ख्याल दिदा रुवाखोकी लगायत कोभिड भाइरसबाट समेत बच्न सकिन्छ ।
किन ? स्थानीय अधिकारीहरूलाई तपाईंको वरिपरिको अबस्थाका बारेमा ताजा जानकारी हुन सक्छ । चाँडै नै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई जानकारी गराउँदा तपाईंलाई सही स्वास्थ्य सेवा दिने ठाउँमा पठाउँछन् जसबाट तपाईंको रोग निको हुन्छ र अरुमा यो रोग फैलनबाट जोगिन्छ ।